Hordhac: Kulanka Galabta Ee kooxaha heerka koobaad Dawlada hoose vs W.Maaliyada.
Waxa galabta dib u bilaami doona horyaalka heerka koobaad ee caasimada somaliland League , waxana la galay Todobaadkii 7AAD,Intii horyaalku socday , kulanka galabta waxa uu dhex mari doona labada kooxood ee Dawladda hoose iyo Wasarada Maaliyada waana kulan todobaadka
kooxda dawlada hoose oo ah kooxada ilaa hada dhinaceed dhulka la dhigi la’yahay una haysa hogaanka horyaalka intii uu furmay ilaa hada ayaa galanta marti galin doonta kooxada W.maaliyada.
dhanka kale kooxda maaliyada ayaa da’daal ay samaysay ciyaarihii u danbeeyay soo gashay kaalinta Sadexaad ee horyaalka waxanay ka dhigan tahay in galabta ciyaarta ay la ciyaarayso dawlada hoose ay u noqon doonto fursad ay ku soo gasho kaalinta labaad , dhanka kale na waxay Unbeaten ka jabin doonta dawlada hoose hadii ay ciyaarta guushu raacdo kooxda Maaliyada.
Ciyaartan waxa kooxda Maaliyada ka Maqnan doona Difaaca ay kooxdu ku tiirsan tahay ee Mukhtaar Nuur Daahir(Torino) oo ku maqnan doona sadex yellow card
oo qaatay ciyaarihii ay kooxdu soo ciyaartay.
Dhanka kale sidoo kale waxa kooxda dawlada hoose ka maqnan doona mishiinka khadka dhexe ee Khaalid Cali Cumar oo isna ku maqnan doona sadex yellow card oo uu qaatay
intii uu socday horyaalku
Waxa Xusid mudan in wali werar yahanka kooxda dawladda hoose Xamse abdiqaadir (Xamse Curiye) wali ku maqan tahay Ganaaxii ay dul dhigaan SLFF ciyaartii uu qaatay cardka cas